Mon, Jul 6, 2020 at 5:16am
बाढीका कारण अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसीको जनजीवन प्रभावित (भिडिओसहित)
काठमाडौँ, २४ असार । अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा भिषण वर्षापछि आएको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ । बाढीका कारण सडकयात्री र यातायातमा सवार सबै अलपत्र परेका छन् भने अधिकांश सवारीसाधनहरुको आधाभन्दा बढी भाग बाढीले डुबाएको छ । सुरुङ रेलमार्गहरु समेत प्रभावित भएका छन् । कति चालकहरुले गाडी बाटोमै छोडेर भागेका छन् । अलपत्र परेकाहरुको उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासनले उद्धार टोली खटाएको छ..
सिरियामा जर्मनीले सैनिक नपठाउने भएपछि अमेरिकालाई झट्का !
बर्लिन, २३ असार जर्मनीले सिरियामा सैनिक पठाउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ । सिरियामा सक्रिय इस्लामिक स्टेट समूह विरुद्धको सैनिक कारबाहीमा सघाउन अमेरिकाले केही दिनअघि जर्मनीलाई अनुरोध गरेको थियो । जर्मन सरकारका प्रवक्ता स्टिफेन साइबर्टले इस्लामिक स्टेट समूह विरुद्धको वृहद् गठबन्धनमा जर्मनी सहभागी रहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिइने बताउँदै प्रत्यक्ष सैन्य परिचालन नगरिने स्पष्ट गरे। सिरियासम्बन्धी अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जेम्स जेफ्रीले..
ब्रिटिस एअरवेजलाई यात्रुको डाटा चोरेका अभियोगमा २ करोड २९ लाख डलर जरिवाना
लण्डन, २३ असार बेलायती विमान कम्पनी ब्रिटिस एअरवेजलाई लाखौँ यात्रुको डाटा चोरीमा दोषी ठहर गर्दै १८ करोड ३० लाख ३९ हजार पाउण्ड सटर्लिङ (२२ करोड ९० लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) जरिवाना गरिएको विमानकम्पनीको मातृ समूह ‘इन्टरनेशनल एअरलाइन्स ग्रुप’ (आएजी) ले सोमबार जनाएको छ । कम्प्युटरका घुषपैठ (ह्याकर)हरूले गत बर्ष विमानका लाखौँ यात्रुहरूको तथ्याङ्क तथा बैंक विवरण चोरी गरी कानूनविपरित काम गरेको..
अमेरिकासँग 'टक्कर' लिँदै ईरान : युरेनियम उत्पादन बढाउने घोषणा !
काठमाडौं, २२ असार ईरानले युरानियम उत्पादन सीमा बढाउने भएको छ । २०१५ को परमाणु सम्झौता अनुसार तय गरिएको सम्झौता छोड्न लागेको हो । ईरानले परमाणु सम्झौता कायमै होस् भन्न चाहेको तर, युरोपका देशहरु पछाडि हटेको उपविदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले बताए । अमेरिकाले २०१८ मा एकतर्फी रुपमा सम्झौता तोडेको घोषणा गरेको थियो । लगतै अमेरिकाले ईरानमाथि थुप्रै प्रतिबन्ध लगाएको छ । जवाफमा इरानले मेबाट युरेनियम उत्पादन सुरु..
अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा कार बम विस्फोट, १२ को मृत्यु
घाज्नी, २२ असार अफगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा भएको विस्फोटनको घटनामा परी कम्तीमा १२ जना मारिएका छन् । कतारमा अफगानिस्तानको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने बारेमा शान्तिवार्ता भइरहेका बेला अफगानिस्तानमा पछिल्लो समय धेरै विस्फोटनका घटना भइरहेका छन् । आइतबार भएको विस्फोटन पनि त्यसैको श्रृङ्खला भएको र विस्फोटनमा परी अरु कैयौं घाइते भएको जनाइएको छ । गुप्तचरसम्वन्धी एक कार्यालय नजिकै विस्फोटन भएको हो । अमेरिकी सहजकर्ताको समन्वयमा अफगानिस्तानी प्रतिनिधि..
लिबिया संकट : तत्काल युद्धविराम गर्न राष्ट्रसंघको आग्रह
त्रिपोली, २१ असार : संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले लिबियामा तत्काल युद्व विराम गर्न आग्रह गरेको छ । तीन महिनामै एक हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाउदै सुरक्षा परिषद्ले युद्ध विराम गर्न शुक्रबार आह्वान गरेको हो । राजधानी त्रिपोलीनजिकै रहेको ताजौरामा गत मङ्गलबार भएको आक्रमणको घटनाप्रति पनि परिषद्ले निन्दा गरेको छ । लिबियामा पछिल्लो तीन महिनामा भएका विभिन्न आक्रमणका घटनामा परी पाँच सय भन्दा बढी..
प्राचीन मेसोपोटामियन शहर बेबिलोन विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश
काठमाडौँ, २१ असार युनेस्कोले प्राचीन मेसोपोटामियन शहर बेबिलोनलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। ४ हजार वर्ष पुरानो सभ्यता बोकेको बेबिलोनलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउन इराकले सन् १९८३ देखि नै प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। विश्वको सात आश्चर्यमध्ये पर्ने 'ह्याङगिङ गार्डेन' का लागि बेबिलोन शहर प्रख्यात रहेको थियो। सद्दाम हुसेनको शासनकालमा सो शहरमा दरबार बनाउन सुरु गरिएसँगै बेबिलोनको अस्तित्व संकटममा परेको बताइन्छ। पछि त्यहाँ..
सोमालियामा शान्तिको सार्थक पहल, इस्लामिक लडाकूहरुलाई सुरक्षा सेवामा समायोजन गरिंदै
मोगादिसु, २० असार : सोमाली सरकारले मध्यम इस्लामिक समूह अहलु सुन्ना वलिजामा (एएसडब्लुजे) मा आबद्ध लडाकूहरुलाई सोमालियाका सुरक्षा अंगहरुमा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ । सोमालियाका प्रधानमन्त्री हस्सन अलि खयरेले सोमालियाको गलमुदुग राज्यको राजधानी धुसामारेबमा उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो । सोमालिया सरकार तपाइँहरुको पक्षमा छ । गलमुदुगमा राजनीतिक स्थायित्व बहाल गर्ने कार्यमा हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं, त्यसमा सबैको सहयोग अति आवश्यक छ । त्यस..
श्रीमती भागेपछि युएईका प्रधानमन्त्री बेलायती अदालतको शरणमा
युएई, २० असार । संयुक्त अरब इमिरेट्सका उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री श्रीमती भागेपछि बेलायती अदालतको शरणमा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन रसिद अल मकतोमले आफ्नी श्रीमतीहरुमध्ये एक राजकुमारी हया बिन्ट अल हुसेनविरुद्ध बेलायती अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। जोर्डनका पूर्व राजाकी बहिनी रहेकी हयाले दुबईका शासकसमेत रहेका श्रीमान शेखलाई छोडेर दुबईबाट लण्डन पुगेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको ब्रिटिस मिडियाहरुले जनाएका छन्। अर्बपति शेखले आफ्नी श्रीमतीविरुद्ध..
यी ८ देश जसले आवश्यकता पर्दा भाडामा सेना लिन्छन्
एजेन्सी, १९ असार संसारमा अमेरिकाले सेनालाई धेरै खर्च छ । अमेरिकापछि चीनले सैन्य क्षेत्रमा अत्याधिक खर्च गर्ने गरेको छ । यि त भए सेनाका लागि लगानी गर्ने राष्ट । संसारमा त्यस्ता देशहरु पनि छन्, जहाँ सेना नै छैन् । आवश्यकता परेको अवस्था ति देशहरुले विदेशबाट सेनालाई भाडामा लिने गरेका छन् । कोस्टारिका सन् १९४८ को राष्टपति चुनावमा धाँधली भएपछि कोस्टारिकामा जनविद्रोह भएको थियो..
सबैभन्दा महँगो सम्बन्ध विच्छेद : अंशको आधा सम्पत्ति दान गर्दै श्रीमति
एजेन्सी, १८ असार विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस र उनकी पत्नी मेकेन्जी बेजोसबीच सम्बन्धविच्छेद हुने भएको छ । २६ वर्षअघि यी दुवैको बीचमा विवाह भएको थियो । सम्बन्ध विच्छेदपछि मेकेन्जीले ३८ अर्ब डलर रकम पाउनेछिन् । यो विश्वको सबैभन्दा महँगो सम्बन्धविच्छेद मानिएको छ । बेजोस अमेजनका संस्थापक र सीईओ हुन् । लेखिका ४९ वर्षीया मेकेन्जी विश्वकी चौथी सबैभन्दा धनी..
शरणार्थी हिरासतमा हवाइ आक्रमण हुँदा ४० जनाकाे मृत्यु
त्रिपोली, १८ असार। लिबियामा भएकाे शरणार्थी हिरासतमा हवाइ आक्रमणमा दर्जनौँ मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। लिबियाको राजधानी त्रिपोलीस्थित शरणार्थीलाई नियन्त्रणमा राखिएकै ठाउँमा हवाइ हमला गर्दा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भएकाे हाे। त्रिपोलीस्थित शरणार्थीलाई नियन्त्रणमा राखिएको स्थलमा हवाइ हमला भएको कुरा स्वास्थ्य अधिकारीले जनाएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रवक्ता मालेक मर्सेकका अनुसार मंगलबारको उक्त हमलामा कम्तिमा ४० जना मारिएका थिए । साथै ८० जना घाइते भएको बताइएको..
लिबियाको बन्दीगृहमा हवाई हमला हुँदा ४० जनाको मृत्यु
काठमाडाैं, १८ असार । लिबियास्थित एक बन्दीगृहमा हवाई हमला हुँदा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएकाे छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार लिबियाको राजधानी त्रिपोलीको पूर्वी तजोरामा रहेको एउटा बन्दीगृहमा भएको हो। जहाँ आप्रवासी राखिएको छ। उक्त बन्दी गृहमा भएको हवाई हमलामा ८० जना घाइते भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। मारिनेमा धेरैजसो अफ्रिकी आप्रवासी रहेको समाचारमा जनाइएको छ।आपत्कालीन सेवासम्बन्धी निकायका प्रवक्ता ओसामा अलीले हमला हुँदा १२०..
'मलाई तत्काल मन्त्रीबाट हटाए पनि कुनै टेन्सन छैन'
बुटवल, १७ असार । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले तत्काल मन्त्रिमण्डल नफेरिने बताएका छन्। मन्त्रीहरु फेरिने भनेर बाहिर आएजस्तो हल्ला भित्र नभएको भन्दै उनले मन्त्रिमण्डल फेरिने सम्भावना नरहेको दाबी गरे ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे सबै मन्त्री फाल्न सक्नुहुन्छ, काम जति राम्रो गरेपनि त्यहि मान्छे बसिरहने कुरा पनि हुँदैन,' मन्त्री खनालले भने, 'अरुलाइ पनि पालो दिनुपर्छ, मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नै हटाएपनि कुनै टेन्सन छैन।’ बुटवलमा..
हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकको चर्काे विरोध, संसद भित्रै पसेर प्रदर्शनकारीले गरे तोडफाेड
एजेन्सी, १७ असार । हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकका बारेमा चर्काे विवाद तथा आलाेचना भइरहेकाे छ। सुपुर्दगी विधेयकको विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीले सोमबार हङकङको संसद भवन भित्रै पसेर तोडफोड गरे। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले हङकङको प्रतीक चिन्हलाई हटाएर वलायती झण्डा फहराएको बीबीसीले जनाएकाे छ। प्रहरीले परिस्थितीलाई नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्ज र आश्रु ग्याँसको प्रयोगसमेत गरेका थिए। वेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको २२ औं वर्षगाठको विशेष अवसरमा हङकङका नागरिकले प्रदर्शन गरेका हुन्। कडा मिहिनेतपछि..
भारी वर्षाका कारण भारतमा २७ जनाकाे मृत्यु, राहतमा समस्या
मुम्बई, १७ असार । मनसुन सक्रिय भएसँगै भारतमा भारी वर्षाका कारण २७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। भारी वर्षाका कारण विभिन्न तीन ठाउँमा पर्खाल भत्किँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या २७ पुगेको हाे । मुम्बई र पुणेका छुट्टाछुट्टै तीन ठाउँमा भारी वर्षाका कारण पर्खाल भत्किँदा २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य धेरै घाइते भएका छन् । केही गम्भीर छन् । मृतकको संख्या बढ्न सक्ने बताइएको छ..
भारतकाे उत्तर प्रदेशमा कर्मचारीले पान-गुटखा खान नपाउने
एजेन्सी, १६ असार भारतको उत्तर प्रदेशमा कर्मचारीले अनुमतिविना उपहार लिन नपाउने भएका छन् । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले सोमवार यस्तो नियम जारी गरेका छन् । नयाँ नियमअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले सचिवालय वा सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि खालका उपहार लान पनि पाउनेछैनन् । यसैगरी सरकारी कर्मचारीले पनि उच्च अधिकारीको अनुमति नभई उपहार लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ । राज्य सरकारका सबै मन्त्रीलाई पनि..
साढे ४ अर्ब र बच्चा लिएर राजकुमारी नै भागेपछि...
काठमाडौँ, १६ असार । दुबईका अरबपति राजकुमार शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूमका छैटौँ श्रीमती राजकुमारी हया बिन्त अल हुसैनले देश छाडेर भागेका छन् । उनले करिब चार अर्ब ३३ करोड ६० लाख रूपैयाँसहित दुई बच्चा जलिला (११) र जायेद (७) लिएर भागेकाे समाचारमा जनाइएको छ । समाचारका अनुसार राजकुमारी हया लण्डनमा लुक्दै आएकी छन् । उनी जेर्डनका राजा अब्दुल्लाकी सौतनी बहिनी..
यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा दुई विमानस्थलमा फेरि ड्रोन आक्रमण
साउदी, १५ असार। अरेबियाको दक्षिणी आसिर प्रान्तमा रहेका दुई विमानस्थलमा फेरि ड्रोन आक्रमण भएकाे छ । यमनका हुथी विद्रोहीहरुले साउदी अरेबियाको दक्षिणी आसिर प्रान्तमा रहेको आभा विमानस्थलमा मानवविहीन बिमान 'ड्रोन' बाट आक्रमण गरेका हुन् । विद्रोहीहरुले जिजान प्रान्तको जिजान बिमानस्थलमा समेत ड्रोनमार्फत बम आक्रमण गरेको दाबी पनि गरेका छन् । दुबै ड्रोन आक्रमणबाट आभा र जिजान बिमानस्थलका बिमान ह्याङ्गरमा आक्रमण गरिएको विद्रोहीद्वारा संचालित मासिराह टेलिभिजनले..
हुवावेमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध फुकुवा ! यसरी ‘कोर्स’ उल्ट्याए ट्रम्पले !!
एजेन्सी, असार १५ । विश्वका आर्थिक रुपमा सबैभन्दा शक्तिशाली दुई मुलुक अमेरिका र चीन आपसी व्यापारिक युद्धको अवस्थालाई कम गर्न दुई पक्षिय वार्ता जारी राख्न सहमत भएका छन् । अमेरिकी सरकारले चिनियाँ दूरसञ्चार सामग्री उत्पादक कम्पनी हुवावेलाई कालोसूचीमा राखेको ६ हप्तामै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘कोर्स’ उल्ट्याइदिएका छन् । वार्ताका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई अमेरिकामा बिक्री जारी राख्ने अनुमति दिने जनाएका छन्..
राष्ट्रपति ट्रम्प र किमबीच भेटघाट, किमलाई ह्वाइटहाउसमा आउन निम्तो
पानमुनजोम, १५ असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ अनलाई अमेरिका भ्रमणको निम्ता दिनुभएको छ । उत्तर र दक्षिण कोरिया छुट्याउने असैनिक क्षेत्रमा भएको पहिलो ऐतिहासिक भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेतालाई अमेरिका भ्रमणको निम्ता दिनुभएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पले ह्वाइट हाउस भ्रमणका लागि किमलाई आफूले स्वागत र निमन्त्रणा गरेको जानकारी दिनुभयो । दुबै नेताबीच यो तेस्रो भेटवार्ता..
लागु औषध अपराधका दोषीलाई मृत्युदण्ड दिन श्रीलंकामा २ नयाँ कर्मचारी नियुक्त
श्रीलंका, १५ असार । श्रीलंकाले मृत्युदण्डकाे सजाय पाएका व्यक्तिलाई फासी दिन दुई कर्मचारी नियुक्त गरेकाे छ। मृत्युदण्डको सजाय पाएका व्यक्तिलाई फासी दिन श्रीलंकाले दुई व्यक्ति नियुक्त गरेको हाे। पछिल्लो ४३ वर्षमा श्रीलंकाले फासी दिन नयाँ कर्मचारी नियुक्त गरेको याे पहिलो पटक हो । लागु औषध अपराधमा दोषी पाइएका चारजनालाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा गरेपछि मृत्युदण्ड दिने दुईजना नियुक्त भएका हुन्। फासी दिने पदका लागि गएको फेब्रुअरीमा प्रकाशित भएको विज्ञापनमा एक समय..
फ्रान्सको तापक्रम पहिलो पटक ४५ डिग्री सेल्सियस नाघ्यो
एजेन्सी, १३ असार फ्रान्समा पहिलो पटक ४५ डिग्री सेल्सियस (११३ डिग्री फरेनहाइट) तापक्रम मापन गरिएको यहाँको मौसम विज्ञानसम्बन्धी कार्यालय मेटेओ–फ्रान्सले शुक्रबार जनाएको छ। जलवायु परिवर्तनसँगै विश्वभर देखिएको तापक्रम वृद्धिको समस्या देखिनेक्रम जारी रहिरहँदा फ्रान्समा पनि यसको प्रभाव देखिएको मौसम विज्ञान विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूले लामो समयसम्म वर्षा नहुनु र जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा देखिएको असन्तुलनका कारण तापक्रमवृद्धि भएको हो । ..
२० वटा औद्योगिक राष्ट्रको शिखर सम्मेलन जापानको ओसाकामा शुरु [फोटोफिचर]
ओसाका, १३ असार । बीसवटा औद्योगिक राष्ट्रको समूह (जि–२०)को शिखर सम्मेलन शुक्रबार जापानको ओसाका शहरमा शुरु भएको छ । सो सम्मेलनको शुक्रबार बिहान ओसाका शहरमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले औपचारिक रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । सो सम्मेलनमा सहभागी हुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ बिहीबार जापानको ओसाका शहर आइपुग्नुभएको बताइएको थियो । विश्वमा हाल कतिपय विषयको व्यापारमा प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरुका बीचमा मतान्तर कायम रहेकै समयमा विश्वका..
अमेरिकाले हिंसा नरोके झन् ठूलो हमला गर्ने इरानको चेतावनी !
तेहरान, १२ असार अमेरिकाले सीमाक्षेत्रमा बढाउँदै गरेको सैन्य हिंसा नरोके गत साता भन्दा ठूलो क्षति हुने गरी हमला गर्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ । इरानको संसदका प्रवक्ता अली लारिजानीले गत साता ड्रोन खसालेको भन्दा ठूलो हमला गर्नुसक्ने भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । ‘यदी उनीहरुले हाम्रो सीमा क्षेत्रमा हिंसात्मक गतिविधि दोहोर्याउँदै गरे हाम्रो कारवाही झनै घातक हुने छ,’ लारिजानीले भनेका छन् । जुन..
अनियन्त्रित बिमान भवनमा ठोक्कियो, धावनमार्गबाट १०० मिटर टाढा उछिट्टियो !
मस्को, १२ असार । रुसको साइबेरियामा बिहीबार अवतरणका क्रममा अनियन्त्रित भएको एउटा सानो यात्रुबाहक विमान बिमानस्थल नजिकैको भवनमा ठोक्किएर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालक दलका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । साइबेरियाको निझनियनगास्र्क विमानस्थलमा आपतकालीन अवतरण गर्नेक्रममा बिमान दुर्घटनाग्रस्त भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । एएन–२४ कलसाइन रहेको उक्त विमान उलान–उडबाट आएको थियो । उक्त बिमान धावनमार्गबाट करिब १०० मिटर टाढा उछिट्टिएको थियो । आपतकालीन अवतरण..
इरान ध्वस्त पार्ने डोनाल्ड ट्रम्पको चेतावानी
वाशिंटन डिसी, ११ असार । अमेरिकी राष्ट्रिपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई ध्वस्त पार्ने चेतावानी दिएका छन्। इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासन मानसिक रुपमा अस्थीर रहेको टिप्पणी गरेपछि आक्रोपिशत बनेका ट्रम्पले इरानको केही भाग ध्वस्त पार्ने बताएका हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा एक ट्वीट गर्दै इरानले कुनै पनि अमेरिकी निशानामा आक्रमण गरेमा त्यसले विशाल अमेरिकी शक्तिले प्रतिक्रिया दिने र इरानका केही..
इरान अमेरिकासँग कहिल्यै युद्ध चाहँदैन : राष्ट्रपति रौहानी
तेहरान ,११ असार इरानी राष्ट्रपति हसन रौहानीले इरानले अमेरिकासँग कहिल्यै पनि युद्ध चाहँदैन भन्नुभएको छ । उहाँले बुधबार सो धारणा राख्नुभएको इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुले जानकारी दिएका छन् । इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच तनाव चुलिएका बेला इरानी राष्ट्रपति रौहानीको यो अभिव्यक्ति आएको छ । पछिल्ला केही महिनायता यी दुई देशबीचको तनाव चुलिएको बताइछ । इरानलाई कसैसँग पनि तनाव बढाउने कुनै इच्छा छैन– उहाँलाई..
जी–२० बैठक : सि जिनपिङ र मोदीलाई भेट्दै डोनाल्ड ट्रम्प
टोकियो, १० असार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यही साता जापानमा हुने जी–२० बैठकमा विश्वका केही प्रभावशाली नेताहरुलाई साइडलाइन मिटिङको रुपमा भेट्ने तयारी गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ट्रम्पले तयारी गरेको भेटवार्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले विशेष महत्व दिएर सम्प्रेषण गरेका छन् । दुईदिने बैठकका लागि ट्रम्प आगामी २७ तारिखमा जापानका लागि उड्ने बताइएको छ । ओसाकामा हुने..
अमेरिका इरानबीच टकराव : इरानी सर्वोच्च नेतालाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको घोषणा
वासिङ्टन, १० असार । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्धहरु लगाउने घोषणा गरेका छन् । अबको प्रतिबन्धले इरानका सर्वोच्च नेता र पूर्व राष्ट्रपति अलि खामेनीलाई समेत प्रभावित गर्ने ट्रम्पले बताए छन् । केही दिन अघि इरानले अमेरिकी ड्रोन खसालेपछि ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमण गर्न आदेश दिएका थिए । तर आक्रमणका कारण १५० इरानी नागरिकको मृत्यु हुने सूचना पाएपछि ट्रम्पले आफ्नो निर्णय फिर्ता..
Results 1607: You are at page 20 of 54